Ny Fitsingerenana’ny Andro Nahaterahako · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 17:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Ελληνικά, Magyar, Français, Deutsch, polski, Italiano, عربي
Ampahany amin'ny andiany manokana amin'ireo lahatsoratra nosoratan'ilay mpitoraka bilaogy sady mpikatroka mafana fo, Marcell Shehwaro, mitantara ny fiainana any Syria mandritra ny ady eo amin'ireo hery mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ireo mitady ny hialàny ity lahatsoratra ity.
Manokatra facebook aho mba hijery ny firariantsoa amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Nanararaotra ilay fotoana aho mba hamaliana ilay firariantsoa, sy hanonerana ireo telo taona izay tsy nahafahako nandefa firariantsoa ho azy noho ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Telo taona no nigadrany noho ny nanoratany tamin'ny aterineto. Nahazatra ahy ny nandray anjara tao amin'ny haban-tranonkalany. Akhawia no anarany.
Namana mahafinaritra i Karim Arabji.